दिमागमा आएका कुरा सामाजिक संजालमा लेखि हाल्ने बानि छ ? यो सुझाब पढ्नुहोस - Arthapage
दिमागमा आएका कुरा सामाजिक संजालमा लेखि हाल्ने बानि छ ? यो सुझाब पढ्नुहोस
प्रकाशित मितिः २१ पुष २०७५, शनिबार ०७:५९ January 5, 2019
सामाजिक संजाल बिचार व्यक्त गर्ने मात्र नभई भावना पोख्ने गतिलो माध्यम बनेको छ। कहिलेकाहीं रिस र आबेश समेत भावनासंगसंगै सामाजिक संजालमा पोखिदा कतिपय मानिसहरु करियर नै सकिएको उदाहरण प्रशस्त छन। त्यसैले पनि सामाजिक संजालमा हतारमा लेखेका कुरा हतारमै मेटाउने (डिलिट) गर्नेहरुको संख्याको कमि छैन।
अनावश्यक झमेलामा पर्ने डरले लेखेका कुरा डिलेट गर्नेको समूहमा साधारण व्यक्ति मात्र नभई अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत पर्छन। ट्रम्पले २७ सेप्टेम्बरमा रोय मुरे र लुथर स्ट्रेन्जबारे गरेको एउटा ट्विट विवादास्पद बन्यो। विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि तनाब व्यवस्थापन गर्न ट्रंपले पछि उक्त ट्विट डिलेट नै गर्न बाध्य भए।
ट्रंप प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन। सामाजिक संजालमा लेखेकै कारण कयौं व्यक्ति आलोचनाको पात्र बनेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरुलाई अमेरिकाका पुर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा पत्नी मिसेल ओबामाले सोचेर मात्र ‘स्ट्याटस’ पोस्ट् गर्न सल्लाह दिएकी छिन।
ओबामा फाउन्डेसनद्वारा अक्टोबर ३१ र नोभेम्बर १ मा चलेको ‘युथ लिडरसिप समिट’को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मिचेलले भनिन्, ‘शब्दहरूले अर्थ राख्छन् । बोल्दा ध्यान दिनुहोस् ।’
स्ट्याटस, ट्विट धेरै मान्छेसम्म पुग्ने भएकाले केही क्षण सोचेर मात्रै पोस्ट् गर्न उनको सुझाब छ। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका विचार आफ्नै इतिहास हुन्, त्यसैले अर्थपूर्ण कुरालाई मात्रै स्थान दिन जरुरी छ । ट्विटरलाई दिमागमा आएका हरेक विचारहरूलाई पोस्ट् गर्ने साधनको रूपमा मात्र नलिन मिचेल आग्रह गर्छिन्।
युवा नेतृत्व शिखर सम्मेलनको उद्देश्य नै नयाँ पुस्तासँग संवाद गर्ने भन्ने थियो । अर्थात्, पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको दूरी हटाउनु । कार्यक्रममा ६० देशका लगभग पाँच सय युवाको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा राजकुमार ह्यारी पनि उपस्थित थिए । कार्यक्रम अवधिभर युवासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल चल्यो । सामाजिक सञ्जालका विषयमा मिचेलले केही समय बोलेकी थिइन् ।
‘तपाईंसँग शब्द छन् भन्दैमा यसलाई जसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने होइन,’ ओबामाले कवि एलिजाबेथ अलेक्जेन्डरसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘दिमागमा जे कुरा आयो त्यो भनिनहाल्नुस् । प्रत्येक सोचाइलाई ट्विटमा बदल्नुपर्छ भन्ने छैन । तपाईंले अहिले सोचेका कुरा एकैछिनपछि काम नलाग्ने पनि हुन सक्छ ।’
कार्यक्रममा अलेक्जेन्डरको पहिलो प्रश्न थियो, ‘शब्दबाटै हामी को हौं भन्ने कुरा पनि पत्ता लाग्छ । जब तपाईं सार्वजानिक रूपमा आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ भने त्यो निकै प्रयोगकारी बन्न सक्छ । शब्दको महत्व बताइदिनुस् ? ’
जवाफमा मिचेलले आफू हरेक शब्दहरूको प्रभाव विचार गरेरमात्रै बोल्ने बताएकी थिइन् । अहिलेको दुनियाँमा सामाजिक सञ्जाल एकदमै ‘शक्तिशाली हतियार’ बन्ने सक्ने कुरामा उनको जोड थियो । सामाजिक सञ्जालबारे खरो टिप्पणी गरिरहँदा दर्शकले निरन्तर ताली बजाइरहेका थिए । हाँसो पनि चलिरहेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने जानकारीसँगै उनले यो पनि भनिन्, ‘मैले कसैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा भनिरहेको छैन । हामी सबै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले बुझ्नुपर्छ ।’
नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगिसकेपछि शब्दहरूले झनै महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने उनको अनुभव छ । नेतृत्वसँग जनताको अपेक्षा हुन्छ । उनीहरूले नै जथाभावी बोल्न÷लेख्न थाले भने गलत सन्देश जाने मिचेलले बताइन् ।
प्रकाशित मितिः २१ पुष २०७५, शनिबार ०७:५९ |
Prev‘कप्तान १९९८’ बिमोचनमा जे देखियो…
Nextमेयर राणालाई सर्वसाधारणको जवाफ–‘..भने जस्तै भए वर्षातमा कोठा सार्न नपर्ला ’